ထိတှေ့ – Ernest Bevin ကောလိပ်
Ernest Bevin ကောလိပ်
ကျောင်းအုပ်ကြီး: Ms Tracy Dohel
တယ်လီဖုန်း: 020 8672 8582
လန်ဒန်, SW17 7DF
တယ်လီ: 0208 672 8582
ဖက်စ်: 020 8767 5502
ဒုကျောင်းအုပ်ကြီး: မစ္စ N ကို. Patel
သူတို့ကအပေါ်ကောလိပ်မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် 0208 672 8582. ကောလိပ်ရှိ SEND အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ
လမ်းကြောင်းများ 155, 219, 249, 319, 355, 690 အားလုံးကောလိပ်အားဖြင့်အနီးကပ်ဖြတ်သန်းရတယ်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ TFL ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ link ကိုနှိပ်ပါ (ကျွန်ုပ်တို့၏စာပို့သင်္ကေတ SW17 7DF ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုသည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည် Tooting Bec ဘူတာမှလမ်းလျှောက်။ အနည်းငယ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်ပါသည်.
Tooting Bec မှလမ်းလျှောက်ခြင်း:
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူလမ်းမကြီးပေါ်ရှိဘူတာရုံမှထွက်ပါ, ညာဘက်လှည့်ပါ။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူလမ်းကိုလျှောက်ပါ, သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူလမ်းမကြီး / M ကလမ်းလျှောက်သွားသူကိုကူးဖြတ်ပါ&S ကားဂိုဒေါင်. newsagents များဖြတ်သန်းသွားသော Glenburnie Road သို့ပထမ ဦး ဆုံးဘယ်ဘက်ကိုခေါ်သွားပါ & ကဖေး, then first right into Langroyd Road. ဘယ်ဘက်ကွေးပတ်ပတ်လည်၌ဤလမ်းအတိုင်းလိုက်နာ (က Brenda လမ်းဖြစ်လာသည်).
Brenda လမ်း၏အဆုံးတွင်သင်သည် Ernest Bevin ကောလိပ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်. လူသွားလူကူးကူးကိုသုံးပြီးကားဝင်းကိုဖြတ်ပြီးအားကစားစင်တာကိုဝင်ရန်အဓိကဝင်ပေါက်အတွက်ညာဘက်သို့လှည့်ပါ (ညနေခင်းများ & အစီအစဉ်များဖြင့်သာ).